မဒေါင်းလုပ် Hello Neighbor2မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် Hello Neighbor 2,
အိမ်နီးချင်းမင်္ဂလာပါ2Steam မှာ! Hello Neighbor2Alpha 1, PC တွင်အကောင်းဆုံးကိုယ်ပျောက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောဂိမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုအခါအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။ Hello Neighbor2Alpha 1 ကိုမဖြန့်ချီခင် free download ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Hello Neighbor, PC နှင့် mobile တို့တွင်အကောင်းဆုံးကိုယ်ပျောက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာဂိမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးပွဲ၏အဖြစ်အပျက်များအပြီးပျောက်ကွယ်သွားသူမစ္စတာပီတာဆန်ကိုရှာဖွေရန်သင့်အားလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောသတ္တဝါတစ်ကောင်နောက်သို့လိုက်နေသည်။ အိမ်နီးချင်းမင်္ဂလာပါ2Steam မှာ!
Hello Neighbor2ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Hello Neighbor2သည်ကိုယ်ပျောက်အခြေပြုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းဖြစ်ပြီးသင်၏သတ္တ ၀ ါသည်သင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအိမ်နီးချင်းကိုရှာဖွေရန်လိုက်ရှာသည်။ သင်လေ့လာသည့် AI: သင်ကြားမှု AI: အတုဥာဏ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးသင့်အားချုံခိုတိုက်ခိုက်ရန်နည်းလမ်းများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ အတုထောက်လှမ်းရေးသည်သင့်အားခြေရာခံနေသည်။ အတုထောက်လှမ်းရေးဟာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိပါတယ်; တောထဲသို့သွားအိပ်၊ စားသောက်၊ ချက်ပြုတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အိတ်များကိုဖယ်ရှားရန်။ Artificial Intelligence သည်အရာဝတ္ထုများကိုသင်ပြုသည့်အတိုင်းအသုံးပြုသည်။ ဥပမာ; သင်ဖွင့်ရန်မီးသတ်ဘူးကိုအသုံးပြုသည့်အခါဉာဏ်ရည်တုသည်အလားတူစွာပြုသည်။ ပွင့်လင်းကမ္ဘာ - Raven Brooks ကိုစူးစမ်းပါ၊ ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ၊ ဂိမ်း၏အစမှမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်သွားနိုင်သည်။ Artificial Intelligence ကအိမ်ထဲဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါအိမ်ကိုကာကွယ်ပေးတယ်၊သင်သွားလေရာရာ၌အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ မင်းမှာမင်းကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းရှိတယ်။ ဇာတ်လမ်းကိုသင်ကစားပုံနှင့်ပုံဖော်သည်။ သင့်၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အညီကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားသည် Sandbox အတွေ့အကြုံ - ပဟေpိအမျိုးမျိုးကိုပစ္စည်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပလက်ဖောင်းစွမ်းရည်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဖန်တီးနိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ In-game ဖြစ်ရပ်အများစုကိုအမြဲတမ်းကျပန်းအစီအစဉ်ဖြင့်စီစဉ်ထားသည်။ ဒါကကမ္ဘာကိုသက်ရှိခံစားမှုတစ်ခုပေးသည်။ သငျသညျကျပန်း In- ဂိမ်းဖြစ်ရပ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုရနိုင်သည်။သငျသညျကျပန်း In- ဂိမ်းဖြစ်ရပ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုရနိုင်သည်။သငျသညျကျပန်း In- ဂိမ်းဖြစ်ရပ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုရနိုင်သည်။
သင့်ကွန်ပျူတာက Hello Neighbor2ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့် hardware ကို Hello Neighbor2PC system requirements အောက်တွင်သတ်မှတ်ထားသည်။ အနည်းဆုံး system requirements
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ: Windows 10 64-bit
ပရိုဆက်ဆာ - Intel i5 (သို့) ဒီထက်ကောင်းတယ်
ဂရပ်ဖစ်: Nvidia GTX 770 နှင့်အထက်
သိုလှောင်မှု -4GB ရရှိနိုင်သောနေရာ
ပရိုဆက်ဆာ: Intel i7
မှတ်ဉာဏ်: 8 GB RAM
ဂရပ်ဖစ်: Nvidia GTX 1060
Hello Neighbor2မသတ်မှတ်ချက်များ